स्वास्थ्य सन्देश Archives - Page 13 of 19 - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
पेटमा अल्सर हुनु मात्र दुखाई मात्रै होइन, निकै खतरनाकसमेत सावित हुन सक्दछ । यो समस्या थाहा पाउने बित्तिकै यसको उपचार सुरु गर्नु जरुरी हुन्छ । अन्यथा यसले आन्द्राको क्यान्सर पनि जन्माउन सक्छ । पेटको अल्सर अर्थात पेटमा हुने छाला वा यस्तो घाउ जुन फोका...
२०७८ वैशाख २६ गते १२:४३
काठमाडौ : पूरै देश महामा’रीमा परेको छ । हरेक नागरिक कोरो’नावाट जोगीने अनेक उपाय अपनाइरहेका छन् । व्यक्तिले सबै नियमहरू पालना गर्न थालेको छ, शारीरिक दूरी बनाउने देखि मास्क लगाएर को’रोनावाट बच्ने उपाय गरिरहेका छन् । सबैलाई कोरो’नाबाट टाढा रहन यति मात्र प¥र्याप्त छैन।...
२०७८ वैशाख २६ गते १०:५५
काठमाडौँ । यो कुरा तपाईहरु सबैलाई थाहा नै छ होला कि हरियो खुर्सानी बिना नेपाली खाना खान सोच्न पनि सकिदैन। तर सायद तपाईलाई यो कुरा थाहा छैन होला कि हरियो खुसार्नीले स्वास्थ्यमा धेरै लाभ पुर्याउँछ। हरियो खुसार्नी एक औषधी समान हुन्छ। जसले कैयौँ रोगलाई...
होम आइसोलेसनमा बस्दा यी १६ उपाय अपनाऔं-पढेर अवस्य सेयर गर्नुहोला
२०७८ वैशाख २५ गते १५:५६
१. थर्ममिटरबाट तापक्रम नापिरहनुहोला। ९८ – ९९ फरेनहाइटसम्म व्यक्ति अनुसार नर्मल तापक्रम हो। १०० पुग्यो भने पारासिटामोल खानुहोला। शरीर दुखेमा र टाउको दुखेमा पनि पारासिटामोल खान सकिन्छ। २. पल्स अक्सिमिटरबाट अक्सिजनको स्तर नापिरहनुहोला। यदि ९४ भन्दा तल गयो भने घोप्टो परेर सुत्नुहोला। यसलाई प्रोन...
नयाँ कोरोनाको यस्तो लक्षण देखिनासाथ सतर्क हुनुहोला
२०७८ वैशाख २५ गते १५:५१
यदि यी लक्षण देखिएमा तुरुन्त पिसिआर टेस्ट गर्नुहोला नत्र ज्या`नै जान सक्छ ! यसपटकको नयाँ प्रजातिको महामारी गतसालको जस्तो सामान्य छैन । ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, शरीर दुख्ने, स्वाद र गन्ध हराउने, पखाला वा र बान्ता हुने,एकदम थकान हुने, निद्रा लागिरहने, छालामा बिमिरा आउने,...
सानो उमेरमै यस्ता संकेतको बेवास्ता नगर्नुहोस,पाठेघर क्यान्सरको लक्षण हुनसक्छ।
२०७८ वैशाख २५ गते १५:०२
काठमाडौँ । पछिल्लो समय महिलामा गर्भाशयको समस्या तिब्र रुपमा बढिरहेको छ। गर्भाशयको क्यान्सर आजभोलि आम समस्या बनेको छ।समयमै पाठेघर अर्थात गर्भाशयको क्यान्सरको लक्षण थाहा पाए उपचार सम्भव हुने चिकित्सक बताउँछन्।आज हामी तपाईलाई गर्भाशयको क्यान्सरका लक्षणका बारेमा जानकारी दिदैछौँ।आउनुहोस् जानौँ कुन कुन हुन् पाठेघरका शुरुवाती...
२०७८ वैशाख २५ गते १५:०१
काठमाडौं । कुनै पनि रोगको लक्षण देखापर्छ । रोगले निकै च्याप्नु अघि छोएसँगै विभिन्न शारीरिक लक्षण देखापर्ने गर्छ । तर, यस्ता लक्षणलाई सामान्य मान्दा पछि ठूलो समस्या आइपर्ने गर्छ। सामान्य लक्षण देखा बेलैमा उपचार गर्न नजानु र आफ्नो जीवनशैलीप्रति ध्यान नदिँदा ठूलो स्वास्थ्य समस्या...
२०७८ वैशाख २४ गते २३:१९
नेपालमा अहिले कोरोनोको दोस्रो लहरको चलिरहेको छ । दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढेको छ ।पहिलो लहरको महामारीमा भन्दा अहिले कोरोना ७० प्रतिशत बढी संक्रामक भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन कमि हुनु निकै ठुलो समस्या हो । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टले स्वाँसप्रस्वास निकै...
२०७८ वैशाख २४ गते १८:०२
काठमाडाैं । नेपालमा अहिले कोरोनोको दोस्रो लहरको चलिरहेको छ । दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढेको छ ।पहिलो लहरको महामारीमा भन्दा अहिले कोरोना ७० प्रतिशत बढी संक्रामक भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन कमि हुनु निकै ठुलो समस्या हो । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टले...
यी चीज भुलेर पनि सँगसँगै नखानुस्, क्यान्सर समेत हुनसक्छ !
२०७८ वैशाख २४ गते १३:३१
काठमाडौंः खान नपाएर भन्दा खान नजानेर कुपोषणको शिकार हुने, विभिन्न रोगब्याधको शिकार हुने, मोटोपना, ज्यान जोखिम र मृत्युसमेत हुनसक्ने खतरा रहन्छ । त्यसमाथि हाम्रो आहारविबहारको शैली र खानेकुरा पनि स्वस्थ्यकर छैन । हामीले सुनेका छौँ, खानेकुराको मात्रा र धेरै खानेकुराहरु एकै चोटि खानाले बिरामी...
« अघिल्ला 1 … 11 12 13 14 15 … 19 पछिल्ला »